Saafi Films - News: Xukuumadda oo tababaro dibada u qaadeyso ciidamada ilaalada wadooyinka
Xukuumadda oo tababaro dibada u qaadeyso ciidamada ilaalada wadooyinka
Wasiirka Warfaafinta Isgaarsiinta boostada iyo gaadiidka Xukuumadda Soomaaliya ayaa maanta shaaca ka qaaday in ciidamada ilaalada wadooyinka ee loo yaqaan taraafikada loo sameyn doono tababaro ku aadan sare uqaadista khibradooda shaqo ee ku aadan kala hagida gaadiidka.
C/laahi Ciilmooge Xersi Wasiirka Warfaafinta Isgaarsiinta boostada iyo gaadiidka Xukuumadda Soomaaliya ayaa sheegay in tababarida ciidanka taraafikada ay kala kaashan doonaan dalal dersi la�ah dalka Soomaaliya.
Wuxuu sheegay in Bishiiba dalka dibadiisa loo qaadayo ilaa 50-ciidan taraafiko ah kuwaasi oo aqoontooda dhanka shaqada ah sare loogu soo qaadayo.
Ciilmooge ayaa sheegay in Xukuumadda iminka ilgaar ah ku eegi doonto ciidamada ilaalada wadooyinka ee Magaalada Muqdisho kuwaasi oo ku shaqeeya xaalado ammaandari iyo duruufo kale oo isbaheesta.
Ciidamada ilaalada wadooyinka ee taraafikada ayaa ka howlgala Magaalada Muqdisho gaar ahaan isgoosyada muhiimka ah halkaasi oo ay ku kala hagaan gaadiidka.
4,532,210 unique visits